Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Galaxy S3 S2 in
> Resource > Transfer > Transfer Xiriirada ka Galaxy S3 S2 in ay in 1 Click
Hayso Galaxy S2 ah oo hadda aad Galaxy S3, sidaas, rabto si ay u gudbiyaan xiriirada ka Galaxy S3 S2 inay? Haddii aad xoojiyaa oo dhan xiriirada ee SIM ka hor, waxaan shaki ku jirin in aad awood wareejinta xiriirada si aad telefoon S3 ku rakibaya Card SIM ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii caddadka xiriirada waa in ka badan hal SIM Card qaban karto, ama aad badbaadin lambarada telefoonka badan oo ku saabsan xasuus aad telefoonka ee, waxa aad samayn doonaa? Xiriirada ayeey mid mid? Waxaa aad u daalin oo wakhti dheer qaata, soo maaha?
Dhab ahaantii, in aad nuqulka Galaxy S2 xiriirada si S3, waxaad isticmaali karaan qalab dhinac saddexaad - Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac , qalab kala iibsiga phone xirfadeed. Waxaa aad u saamaxaaya in ay u guuraan xiriirada ay ka mid yihiin kuwa badbaadiyey on xisaab aad Galaxy S3 ka S2 1 click la xafidaada tayada 100%. Intaa waxaa dheer, tan telefoonka qalab kala iibsiga kaa caawinaysaa in aad wareejiso ku jira in ka badan xiriirada. In si kale loo dhigo, waxa aad awoodi kartaa inaad u guurto barnaamijyadooda, fariimaha qoraalka ah, jadwalka, abuse wac, music, sawiro iyo videos iyo sidoo kale xiriir.
Sidee ay u guuraan xiriirada ka Galaxy S3 S2 in
Download kala iibsiga phone this on your computer. Read tallaabooyinka hoose si aad u barato sida loo wareejiyo xiriiro.
Fiiro gaar ah: Si aad u dhaqaaqo xiriirada badbaadiyey on xisaab in S3, waa in aad saxiixdo in xisaab adiga ku Galaxy S2 hore.
Tallaabada 1. Ku rakib kala iibsiga phone this
Ka dib markii ay soo degsado MobileTrans, waa in aad la rakibi oo ay maamulaan this phone qalab kala iibsiga on your computer. Markaas uu furmo suuqa hoose booda. By gujinaya Start , uu furmo suuqa kala iibsiga phone muuqataa.
Tallaabada 2. Connect Galaxy S3 S2 oo la kombiyuutarka
Markaas, xiriiriyaan Galaxy S3 S2 oo la kombiyuutarka via fiilooyinka USB. Marka ay ku xiran tahay, MobileTrans iyaga lagu ogaan doono iyo rakibi darawallada iyaga on isla markiiba. Marka way dhamaatay, waxaad ka heli doontaa daaqad hoos ku qoran:
Ka hor suuqa kala iibsiga xiriir ah, inaad ka dhammaan karto buugga telefoonnada aad Galaxy S3, phone Ahaado, si loo badbaadiyo kuwa ka S2. Sax off "data Clear hor nuqul" ku yaal hoos phone Ahaado. Haddii aadan rabin in, kaliya keliya ha.
Tallaabada 3. xiriirada Transfer ka Galaxy S3 S2 in
Sida aad ka arki, taas phone qalab kala iibsiga awood inaad nuqul ka wax walba oo ku saabsan Galaxy S3 S2 in. Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad kaliya si ay u gudbiyaan xiriirada, waxaa idinku waajib ah in ay ka saarto marks hor content kale baahisey, kuwaas oo, music, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, jadwalka taariikhda, barnaamijyadooda, sawiro iyo videos. Markaas riix batoonka buluug - Copy Start si ay u bilaabaan kala iibsiga. Fadlan ma xasuusto in barkinta mid ka mid ah telefoonada inta howshu socoto kala iibsiga.
Fiiro gaar ah: Guji Flip , button u dhexeeya labada telefoonada in la beddelo meesha telefoonada 'marka aad rabto in lagu wareejiyo xogta ka Galaxy S3 in S2.
Marka iibsiga ah uu dhamaado, waa in aad riix OK . Markaas xiriir ah ayaa la si guul leh loo wareejiyay aad Galaxy S3. Ka sokow ka S2 wareejinta xiriirada si S3, waxaad samayn kartaa nuqul ka iPhone xiriirada si Galaxy S3 aad.